Keki Adhikari - Actress/Model
Topic: Keki Adhikari - Actress/Model
Author Topic: Keki Adhikari - Actress/Model (Read 76587 times)
Re: Keki Adhikari - Actress/Model
« Reply #40 on: March 07, 2015, 12:35:38 AM »
bhaai tika laai dine re ...
« Reply #41 on: March 09, 2015, 04:14:24 AM »
« Reply #42 on: March 09, 2015, 08:36:26 AM »
Quote from: kurakani on March 09, 2015, 04:14:24 AM
यो हो ....
keki beautiful.jpg (76.43 kB, 540x960 - viewed 198 times.)
« Reply #43 on: June 21, 2015, 04:41:32 AM »
« Reply #44 on: July 07, 2015, 12:47:59 PM »
मलाई मन पर्ने शलमान खान : केकी अधिकारी
पछिल्लो पुस्ताकी चल्तीकी नायिका हुन् केकी अधिकारी । अध्ययनशील नायिकाको रुपमा समेत चिनिने केकीले झण्डै एक दर्जनको हाराहारीका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन । चलचित्र आई.एम.सरीले उनको चर्चा निकै वढेको हो । उनी एक लगनशिल पढेलेखेकी र राम्री कलाकारको रुपमा पनि चिनिन्छीन । चलचित्र निर्देशक वद्री अधिकारी अधिकारी (आफ्नै वुवा) को सहयोगलेनै यहाँ सम्म आउन सफल भएको उनले बताईन । बुवा यहि क्षेत्रमा भएको कारण पनि कलाकारिता क्षेत्रमा आउन सजिलो भएको नायीका अधिकारीको भनाई छ । उनै राम्री नायीका एवं मोडल अधिकारीसँग केही समय अगाडी रंगपोष्ट ले गरेको कुराकानी ।
तपाईको नामको अर्थ ?
– मयुर ।
साच्चीकै मयुरजस्ती हुनुहुन्छ क्या हो ?
– मयुरले आफ्नो वर्णन गर्दैन, आफुलाई राम्रो सोच्दैन होला । मलाई मयुर भन्ने त होलान तर मैले मयुर हो भनेर त्यसरी चाहि सोचीन .।
नायीका वन्ने रुची चाहि कहिले पलायो ?
– म सानै छदाँदेखीनै यो क्षेत्रमा एउटा रुची थियो । अर्को कुरा मेरो वुवानै यो क्षेत्रमा भएको कारण कलाकारीता क्षेत्रमा आउन केही गाह्रो भएन । तर गाह्रो यो कुरामा भयोकी मलाई कसरी अरुले भन्दा राम्रो गरु र अरु भन्दा कसरी भिन्न तरिकाले प्रस्तुती दिन सकुँ ?, तर पनि मेहेनत गर्दै जादाँ सहज भयो । रुचीलेनै यहाँ सम्म ल्यायो । म काठमाण्डौमा रहदाँ डान्स क्लास लिन जान्थे । त्यसपछि म्युजिक भिडीयोको अफर आयो र लगातार मुभीहरु पाईरहेकी छु । मैले अव यो कुरा सोच्न र महसुस गर्न थालेकी अव यो चिज वाहेक अरु केही पनि सोच्न सक्दिन ।
तपाई अभिनीत ८ चलचित्र मध्ये कुनवाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– म सवै कुरावाट सन्तुष्ट भएको चलचित्र चाही ‘मसान’ हो । तर पनि अश्ररु चलचित्रपनि राम्रै भएका छन है । तर केकी अधिकारी भनेर वढि चिनीएको मसानवाट होकी जस्तो मलाई लागेको हो । तर आईएमसरीले पनि मलाई निकै राम्रो गरेको थियो ।
नयाँ योजना केही वनाउनुभएको छ कि ?
– मेरो पहिलो योजना भनेको त जसरी भएपनि एमविए पूरा गर्छु भनेकी छु । त्यसपछि मात्रै चलचित्र र म्युजिक भिडियोको काम राम्रोसँग गर्छु भनेकी छु । तर योजना त धेरैनै छन है भनेरै सकिदैन ।
थोरै प्रशगं वदलौन, विवाह गर्ने सोच पलाएको छैन ?
– नाई, मैले भ्रखरै त्यतातिर सोचेकी छैन । पहिला अध्यनलाई सक्छु त्यसपछि चाहि सोच्छु ।
कसैको पर्खाईमा भएर हो ?
– मैले तपाईलाई पहिला पनि भनिसकेकी हुँनी, मेरो कसैसँग त्यस्तो सम्वन्ध छैन । म कसैको पर्खाईमा छैन र कसैलाई पर्खन पनि भनेकी छैन । विवाहको कुरा भविष्यले वताउँछ कस्तो केटा कसरी विवाह हुन्छ भनेर ।
त्यसो भए कस्तो श्रीमानको खोजीमा हुनुहुन्छ ?
– धेरैले सोच्छन यहि कुरा मलाई वुझ्ने पति होस वा पाईयोस । मेरो पनि यहि हो ।
मन पर्ने कुनै सेलिव्रेटी?
– सलमान खान ।
झट्ट हेर्दा पुरुषको कुन अगमा आखाँ जान्छ ?
– आखाँमा ।
अहिले भर्खरै कसैलाई किस गर्नुप¥यो भने कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
– मेरो मम्मीलाईनी ।
तपार्इंलाई कुन चिज वढि मिठो वनाउन आउँछ ?
– मलाई सवैभन्दा मिठो चियाँ वनाउन आउछ । अरु त पनि वनाउन नजानेको होईन । तर पनि एकदमै मिठो चिया वनाउछु ।
तपाईको विचारमा नेपालमा अब प्रधानमन्त्री बनाउन लायक को छ ?
– गगन थापा अवको प्रधानमन्त्री वन्न लायक छन । उनि एकदमै आटीला छन, विश्वासी छन, आँट छ उनसिगँ ।
यदि अवको प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईहुनुभयो भने पहिले के गर्नुहुन्छ ?
– मलाई प्रधानमन्त्री वनाईयो भने सुरुमा त देशलाई कसरी अगाडी वढाृने भन्ने विषयमा नियम वनाउथे, त्यसपछि त्यस विषयमा गृहकार्य गर्थे । तर हाम्रो देशमा कसरी कुर्चीलाई टिकाउने भन्ने वारेमानै काम भैरहेको हुन्छ ।
घुम्न मन लाएको कुनै देश ?
मान्छे किन रुन्छ ?
– दुखाईले । तपाई यो कुरा नसोध्नुसकि हास्दाँपनि दुख्छत ?, तर म भन्छु हास्दापनि कतै कतै दुखीरहेको हुन्छरे ।
के पाए भन्ने लाग्छ कलाकारीता क्षेत्रमा आएर ?
– जीवनमा धैर्य गर्न सक्नुपर्छ सिकेकी छु । यदि धैर्य रहनेहो भने सफलता जसरी भएपनि पाईन्छ ।
तपाईलाई अवको प्रधानमन्त्री वनाईयो भने सुरुमा के गर्नुहुन्थयो होला ?
– महिला र बालबालिकाको हितका लागि राम्रोसँग काम गर्थे ।
– सेक्स भनेको प्राकृती कुरा हो । जो एकदमै महत्वपुर्ण छ । मलाई लाग्छ खाना जत्तीकै महत्वपुर्ण रुपमा म लिन्छु । तर खानाको र सेक्समा केही फरक त हुनेनै भयो । र मेरो अर्थमा सेक्स भनेको वरदानको रुप पनि हो ।
बिहेअघिको सेक्स कति ठिक हो ?
– ठिक र वेठिक मैले केही पनि भन्दीन । जो महत्वपुर्ण छ त्यसलाई सहि रुपले लिनुपर्छ र गर्नुपर्छ ।
« Reply #45 on: July 09, 2015, 01:13:49 AM »
« Reply #46 on: July 11, 2015, 02:10:43 PM »
« Reply #47 on: August 08, 2016, 01:43:52 PM »
पढाइमा अब्बल ‘हिरोइन’
अशेष अधिकारी काठमाडौं, साउन २४
पढाइमा लगाव कतिसम्म थियो भने, स्नातकमा साह्रै धपेडी भएपछि दुई वर्ष काम रोक्ने हो कि भनेर पनि विचार गरिन्। आमाले सम्झाउँदै भनिन्, ‘एकचोटि ब्रेक भए फेरि सुरु गर्न गाह्रो हुन्छ। जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै चल्न दे। अहिले जसरी मिलाइरहेकी छेस्, भोलि पनि त्यसरी नै मिल्दै जान्छ। सक्दै सकिनस् भने फेरि विचार गरौंला।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २४, २०७३ ११:२६:४९
« Reply #48 on: February 09, 2017, 05:21:59 AM »
मलाई ममः प्यारो : केकी अधिकारी [Interview]
शनि, अशोज ८, २०७३
उनि निकै सुन्दरी छिन् । नेपालमा रहेका नायीकाहरुमध्ये केकी अधिकारी सुन्दरी नायीकाको रुपमा लिईन्छ भने निकै लोकप्रिय र ट्यालेन्ट नायीकाको रुपमा समेत लिने गरिन्छ । प्लस टु को उमेरदेखीनै यो क्षेत्रमा एकाएक उदाएकी उनि पहिलो कमाईनै ३५ हजारवाट सुरु गरिन भने अहिलेसम्म धेरै कमाईन् भने धेरै फ्यान पनि कमाईन । आज केकी अधिकारीसँग रामजी ज्ञवालीले छोटो छोटो कुराकानी गर्नुभएको छ, प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ जिवनमा ?
– जिवनमा खुसी हुनुपर्छ । म खुसीनै छु जिवनमा ।
निकै सुन्दरी हुनुहुन्छ, कुन सावुनले मुख धुनुहुन्छ ?
– म सावुनले मुख धुदैन । मुख धुनका लागी फेसवासनै प्रयोग गर्छु ।
यत्ति सुन्दर हुनुको राज चाहि के भन्नुहुन्छ ?
– खै, मलाई त सुन्दरताको राज केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन । खासमा व्यक्तीको नजर कस्तो छ, उसको मन कस्तो छ त्यसअनुसार अर्को व्यक्ती कत्ति सुन्दर छ भन्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म कतिवटा चलचीत्रमा काम गर्नुभो ?
– एकदर्जन भन्दा माथी पुगे । १४ वटा चलचित्रमा काम गरें ।
जिवनमा कस्तो खालको चलचित्र गर्ने मन छ ?
– खासगरि मैले आएका चलचित्रलाई नाई भनिन, अव चाहि अलिकति चुजी हुनुपर्छकी भन्ने महसुस गरेकी छु ।
नेपाली चलचत्रि राम्रो चल्दै गएको छ, कस्तो लाईराछ ?
– म पनि यहि क्षेत्रमा काम गर्छु, उहि मेरो परिचय पनि कलाकार । खुसी नलाग्ने कुरै भएन, निकैनै खुसी छु । पछिल्लो समय कालोपोथी, पशुपतिप्रसाद जस्ता चलचित्र निकैनै राम्रो चल्यो, धेरै खुसी लाईराछ । नेपाली दर्शकहरु राम्रा चलचित्र र नराम्रा चलचित्र छुट्टाउन थालीसकेका छन् ।
तपाईका फ्यानहरु पनि निकैनै वढिरहेका छन्, कस्तो लाग्छ सम्झदाँ ?
– जिवन काट्दैगर्दा कहि कतै कुनैवेला प्रेसर लो भएको वेला, तनाव भएको वेला, अगाडी जान सक्दैन की जस्तो लागेको वेलामा यहि वढिरहेका साथीहरुको हौसला र मायाँलेनै अगाडी वढ्न सहयोग गर्छ । निकैनै खुसी छु यो कुरामा ।
नेपालको मन पर्ने नायक ?
– राजेश हमाल
– गौरी मल्ल
तपाई धेरै देश पुग्नुभएको, कुन देश एकदमै राम्रो लाग्यो ?
– धेरै देश पुगेको छु, तर मलाई आफ्नै देश निकैनै राम्रो र प्यारो लाग्यो । मौसम, संस्कृती, भाषा र नेपालीविचको आत्मीयताले मलाई नेपालनै राम्रो लाग्छ ।
नेपालको कुन ठाउँ धेरै राम्रो लाग्छ ?
– पोखरानै धेरै राम्रो लाग्छ । त्यहाँ पुगेपछि मनै आनन्दीत वनाउँछ ।
वुवा र आमामध्ये एक जना रोज्नुप¥र्यो भने ?
– दुईवटा औलामा कुन औला काट्ने भनेजस्तै हो ।
जिवनमा पहिलोपटक कमाएको सम्झना छ ?
– म प्लस २ अध्ययनरत थिए । त्यतिवेला पहिलो म्युजिक भिडीयो गरेको थिए त्यतिवेलाको जमानामा, त्यो उमेरमा ३५ हजार कमाएको थिए, त्यतिवेलाको धेरै कमाईनै भन्नुपर्छ । त्यतिवेलाको त्यो कमाईले, प्लस २ पढ्दैगर्दा सवै पुग्छ कीजस्तो लाग्या थियो । त्यो कमाई केही आमालाई, केही साथीहरुसँग रमाईलो गरेर सकाए । एकदिनमा कमाएको त्यो कमाईले मलाई जिवनभरीनै खुसी दिन्छ ।
यति सुन्दरी हुनुहुन्छ, प्रपोजको त ओईरो लाग्छ होला है ?
– त्यस्तो त सामान्यनै हो । आजभोली सामाजिक सन्जालले धेरै सहज वनाएको छ, दैनिक जस्तैनै आउँछ प्रपोज भन्ने कुरा ।
नेपाली नायीकाहरु विदेशमा जमेका नेपालीसँग विहे गर्न थालेका छन्, तपाईको सोच के छ ?
– मलाई मेरो हुनेवाला श्रीमान कहाँ वस्छ भन्दा पनि उ कस्तो खालको छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्छु । उसको वानी व्यवहार उसको परिवार कस्तो हेरेर मात्रै सोच्ने गर्छु । मलाई लाग्छ राम्रै व्यक्ती पाउँछु होला । अझै ५ वर्षभीत्र विहे हुदैन की जस्तो लाग्छ । तर तपाईले भनेजस्तै विदेशमा जमेकै मान्छे भन्ने सोचेको छैन ।
मनको राजकुमार यस्तो होस भन्ने चाहना छैन ?
– व्यक्ती स्मार्ट भन्दा पनि वुझ्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने छ । अरु कुरा मैले सोचेको छैन । विगतको कुरा लिएर तनाव दिने मान्छे ठिक लाग्दैन ।
तपाईलाई आफ्नै मन पर्ने अगं ?
कुनै पुरुष देख्नुभयो भने सुरुमा तपाईको नजर कहाँ जान्छ ?
– आखाँमै ।
संसारमा मन पर्ने एउटा मान्छे ?
– आमानै हो । वावा सवैभन्दा वुझ्ने र मायाँ गर्ने व्यक्ती हो ।
सवैभन्दा मन पर्ने नेपाली चलचीत्र ?
– कन्यादान चलचीत्रनै राम्रो लाग्छ ।
मन पर्ने खानेकुरा ?
– ममः नै मन पर्छ । भातभन्दा पनि वढि मन पर्छ मलाई मम । विदेशका कार्यक्रमहरुमा हुँदा पनि नेपाली ममलाई निकै सम्झन्छु ।
मन पर्ने साथी ?
– मेरो वहिनी हो । उ र म निकै घनिष्ट छौं । हरेक कुरा शेयर पनि गर्छौ ।
« Reply #49 on: February 14, 2017, 11:14:01 PM »